ရွှေစက်တော် မန်းချောင်းအတွင်း ရေမချိုးစေချင် – Manawmaya
ရွှေစက်တော် မန်းချောင်းအတွင်း ရေမချိုးစေချင်
သုံးနှစ်အချိန်ပေးမည်။ သုံးနှစ်နေလို့မှ ဘုရားဖူးတွေ ရေချိုးတဲ့ကိစ္စ မတားမြစ်နိုင်လျှင် ဘုရားပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်
By မနောမယ / March 10, 2018
ကျွန်တော် ၁၅. ၁. ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မင်းဘူးရှင်ပင်စက္ကိန်းတဲဘုရားမှာ မင်းဘူးမြို့အောက်က နာနာဘာဝမြို့သုံးမြို့မှ နာမ်လောကသားများကို ဆွမ်းတော်ပွဲကပ်လှူပြီး အမျှဝေတဲ့ ကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါ မနက် ၉ နာရီခွဲမှာ ရွှေစက်တော်ဘုရားကို သွားရောက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က တစ်ကြိမ်ရွှေစက်တော်ဘုရားသို့ ဘုရားဖူးရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကနဲ့စာလျှင် လမ်းက တော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။ လမ်းမှာ စိမ်းစိုအေးမြနေတဲ့ သစ်တောကြီးကို ဖြတ်ရတော့ စိတ်ကြည်နူးအေးချမ်းပါတယ်။ မုံရွာပုသိမ်လမ်းမကြီးကျော်လာတော့ တောင်ဆင်းတောင်တက် အကွေ့အကောက်တွေ များပါတယ်။
လမ်းကကျဉ်းတော့ လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ ကားတွေကို သတိထားရှောင်မောင်းနေရပါတယ်။ ဘုရားပွဲကျင်းပမည့် ရက်နီးနေတော့ ဘုရားဖူးကားတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကားကအထက်စက်တော်ရာအနီးထိ တက်လို့ရပါတယ်။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ဘုရားဖူးကားတွေ တော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက် ဘုရားဖူးရောက်စဉ်က အထက်စက်တော်ရာကားနဲ့ အတက်မှာ ဦးခန္တီကြီး ဇရပ်ကြီးအနီးမှာ ကားပျက်တဲ့အတွက် အထက်စက်တော်ရာကို မဖူးခဲ့ရပါဘူး။ အောက်စက်တော်ရာကိုပဲ ဖူးခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော် အထက်စက်တော်ရာစေတီမှာ ကန်တော့ပွဲကပ်လှူဖို့ မကွေးကပင် ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းနဲ့ ပန်းကုံးအချို့ကိုတော့ ဒီစက်တော်ရာမှာပဲ ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ အထက်စက်တော်ရာကို ရွှေပိန်းချထားတဲ့ ဥာဏ်တော် ၁၀ တောင်ခန့်ရှိမည့် စေတီနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ စေတီကို မှန်နဲ့ကာရံထားတဲ့ အတွင်းဖက်ကို အမျိုးသမီးတွေ မဝင်ရပါဘူး။ ကျွန်တော် ဘုရားကို ကန်တော့်ပွဲတစ်ပွဲ ငွေ ၅၀ဝဝ ကျပ်၊ ရွှေသင်္ကန်း ၂ ဆိုင်း ကပ်လှူပါတယ်။ ပုတီးကိုးပတ် စိပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပုတီးစိပ်ပြီးမှ သူတကာ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူတာမြင်ရမှ ကျွန်တော်လည်း သတိရပြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပြီးတော့ ရွှေသူဋ္ဌေးကြီးဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လယ်ကိုင်းကျောင်းတော်ရာ ဘုရားနဲ့ မကွေးမြသလွန်ဘုရားများပါ ဒီနေ့တစ်ရက်တည်းဖူးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက် မုဆိုးတောင်နဲ့ အခြားစေတီများမသွားတော့ဘဲ အောက်စက်တော်ရာသို့ ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ မန်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာ ဘုရားပွဲလာရောက်ကြမည့် ဘုရားဖူးများအတွက် ဝါးနဲ့သစ်နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ တည်းခိုဆောင်များ မြောက် မြားစွာတွေ့ရပါတယ်။ မန်းချောင်းကိုလည်း ယာယီတံတားသုံးစင်းဖြတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ မန်းချောင်းက ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ရောက်စဉ်ကထက် ကျဉ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ပေ၄၀လောက် ပဲကျယ်မည်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အောက်စက်တော်ရာမှာ ပန်းများနဲ့ ငွေ ၅၀ဝဝ ကျပ် ကပ်လှူပါတယ်။ ပုတီးကိုးပတ်စိပ်ပါတယ်။ အောက်စက်တော်ရာကို ဖန်ပေါင်းချောင်နဲ့ ထားပါတယ်။ မန်းချောင်းက မိုးရာသီမှာ ရေတက်ရာ အောက်စက်တော်ရာ တန်ဆောင်းအမိုးထိလုနီးပါးမြှုပ်တယ်။ ဘုရားခြေတော်ရာလည်း မြှုပ်ထားတဲ့အတွက် ရေမဝင်နိုင်အောင် လူတွေလည်း ဖူးမြင်နိုင်အောင် ဖန်ပေါင်းချောင်ကြီးနဲ့ အုပ်ပြီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။ ခြေတော်ရာကို ရွှေများချထားတဲ့အတွက် ခြေချောင်းနေရာလေးတွေ မမြင်ရတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်ကိုဗေဒင်ကူညီဟောပေးနေတဲ့ ဘုရားရှင်ကြီးကို ဒီခြေတော်ရာသည် ဂေါတမဘုရား၏ ခြေတော်ရာ စစ်မစစ်မေးလျှောက်ကြည့်ပါတယ်။
ထိုအခါ သင်္ကန်းတော်ရွှေရောင်နဲ့ ဘုရားရှင် ကြီးတစ်ဆူ ကြွရောက်လာပါတယ်။ ဘုရားရှင်က ဂေါတမဘုရားရဲ့ လက်ဝဲဘက်ခြေတော်ရာ အစစ်ဖြစ်ကြောင်း ဂေါတမဘုရားကြွလာတဲ့အခါ နမ္မဒါမြစ်(မန်းချောင်း)ထဲမှ နဂါးတောင်းပန်သဖြင့် မြသားကျောက်ပေါ်မှာ ဝဲဘက်ခြေတော်ရာချထားခဲ့ကြောင်း သစ္စဗန္ဓရဟန္တာတောင်းပန်တဲ့အတွက် မကုလတောင် တွင် မြသားကျောက်ဖြာထက်၌ ဝဲဘက်ခြေတော်ရာ တစ်ဆူချထားခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားပါတယ်။
ကျွန်တော်က ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်များ သံဃာတော်များ တစ်နှစ်လျှင် အပါး ၃၀ဝဝဝ လောက် လူထွက်နေရာ သာသနာတော်အတွက် စိုးရိမ်ရပါကြောင်း လျှောက်ထားရာ ဘုရားရှင်ကြီးက ဒကာကြီး မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ မကြာမီ ဝိနည်းကို လေးစားတဲ့သံဃာတော်တွေ ပေါ်လာလိမ့်မည် မိန့်ကြားပါတယ်။ ဤသို့မိန့်ကြားပြီးဘုရားရှင် ကြီးပြန် ကြွသွားပါတယ်။
ခဏနေတော့ ရွှေရောင်သင်္ကန်းနဲ့ ရဟန္တာကြီးတစ်ပါး ကြွရောက်လာပြန်ပါတယ်။ “ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီး အမိန့်ရှိတော်မူပါ ဘုရား”
“ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲမှာ ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ ဘုရားဖူးတွေအနေနဲ့ ချောင်းထဲရေမချိုးစေချင်ပါဘူး။ ဘုရားပွဲဂေါပကလူကြီးများက တားမြစ်ပေးပါ။ သုံးနှစ်အချိန်ပေးမည်။ သုံးနှစ်နေလို့မှ ဘုရားဖူးတွေ ရေချိုးတဲ့ကိစ္စ မတားမြစ်နိုင်လျှင် ဘုရားပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်”
“ဘယ်လိုကြောင့် ဘုရားဖူးတွေရေမချိုး စေချင်တာပါလဲဘုရား”
“ရေမချိုးစေချင်တာ အကြောင်းသုံးချက်ရှိတယ်။ ဘုရားပွဲကာလမှာ ချောင်းထဲမှာ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ၊ ရဟန်းသံဃာ ရေချိုးကြတယ်။ မိန်းမတွေက အထက်ဖက်က ချိုးတာတွေရှိတယ်။ ရဟန်းသံဃာတွေက ချောင်းအောက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးကြတာရှိတယ်။ အဲဒီလိုချိုးကြတာ မသင့်လျော်ဘူး။ ဒီမန်းချောင်းရဲ့ အောက်မှာ နဂါးကြီး တစ်ကောင်ရှိတယ်။ ဒီနဂါးကြီးက ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဒီမန်းချောင်းဒေသ ကြွလာတဲ့အခါ လူအများ နောင် အရှည်သဖြင့် ကိုးကွယ်ရန် တစ်စုံတစ်ရာပေးသနားရန် တောင်းပန်၍ မြသားအစစ် ကျောက်ဖျာထက်တွင် လက်ဝဲခြေတော်ရာတစ်ဆူ ချပေးတော်မူခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဘုရားပွဲကာလမှာ လူပေါင်းများစွာ ရေချိုးကြ၍ ရေမသန့်တဲ့အတွက် နဂါးကြီးက စိတ်ဆိုးနေ တယ်။ ဒီရွှေစက်တော်တစ်ဝိုက်မှာ သိုက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လောက်ရှိတယ်။ သိုက်က ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ကြည်လင်အေးမြတဲ့ မန်းချောင်းရေကို ချိုးကြတယ်။ ဘုရားပွဲကျင်းပတဲ့ သုံးလလောက်ကာလမှာ လူတွေက မသန့်ရှင်းတဲ့အတွက် သူတို့လည်း ရေမချိုးကြရဘူး။ ဘုရားပွဲကာလ ရေချိုးကြတဲ့သူတွေကလည်း ချောင်းနဲ့ အပြည့်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားပွဲကာလမှာ ဘုရားဖူးတွေကို ချောင်းရေမချိုးဖို့ တားမြစ်ရတာ ဖြစ်တယ်”
“အရှင်မြတ်က ဘယ်ကကြွလာတာပါလဲ ဘုရား”
“ကျုပ်က အထက်စက်တော်ရာမှာ သီတင်းသုံးတဲ့ သောဘိတ ရဟန္တာကြီးပါ။ ကျုပ်က ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲကိုလည်း စောင့်ရှောက်တယ်။ ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာနှစ်ဆူကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲမှာ မုန့်ပဲသရေစာ ရောင်းချတဲ့သူများကို ပြောချင်ပါတယ်။ မိမိဆိုင်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိအောင် ထိန်းသိမ်းကြပါ”
ကျွန်တော်ကို ကားအငှားလိုက်ပို့တဲ့ ကားဆရာက ရွှေစက်တော်နဲ့ မကွေးမင်းဘူး ကြိမ်ဖန်များစွာ သွားလာနေတဲ့အကြောင်း ယခင်နှစ်များက ဘုရားပွဲကာလမှာ လူတွေအလွန်များကြောင်း လာသမျှ လူတွေရေချိုးကြတာ ချောင်းနဲ့အပြည့်ရှိကြောင်း၊ ချောင်းရေက ညစ်ပတ်တဲ့အတွက် ချောင်းရေချိုးပြီးလျှင်ထပ်ပြီး ရေသန့်နဲ့ ချိုးရကြောင်း၊ ဘုရားဂေါပကက အရက်ဆိုင်မဖွင့်ရ တားမြစ်ထားပေမယ့် ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ လူငယ်တွေက အရက်၊ ဘီယာဘူးတွေ မကွေး၊ မင်းဘူးက ဝယ်လာပြီး သောက်ကြကြောင်းပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က ဘုရားပွဲမှာ သားသတ်လိုင်စင်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ မကျေနပ်လို့ ဆောင်းရာသီကြီးမှာ မန်းချောင်းရေတွေ ကြီးလာလို့ လူတွေရော၊ ဆိုင်တွေ၊ တည်းခိုခန်းတွေ မော်တော်ယာဉ်တွေပါ ရေကြီး နစ်မြှုပ်ခဲ့ကြောင်း လူတွေလည်း တော်တော်များများ ရေနစ်မြှုပ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း နေ့လည်၁နာရီခွဲမှာ ရွှေစက်တော်ကနေပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ လယ်ကိုင်းကျောင်းတော်ရာဘုရားသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါတယ်။
လယ်ကိုင်းကျောင်းတော်ရာ ဘုရားမှာ ငွေ ၅၀ဝဝ နဲ့ ပန်းများကပ်လှူ ပုတီးကိုးပတ်စိပ် အမျှဝေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က လယ်ကိုင်းကျောင်းတော်ရာဘုရားမှာ သတင်းသုံးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂံခေတ်က အဘိုးတော်တဲ့ ဝိဇ္ဇာရသေ့ကြီး ရှိပါသေးသလားလို့ ဘုရားစောင့်နတ်ကြီးပင့်မေးလျှောက်ကြည့်တော့ မရှိတော့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီအဘိုးရသေ့ကြီးက လယ်ကိုင်းကျောင်းတော်ရာဘုရားမှာ ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော် ရန်ကုန်အပြန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ရန်ကုန်လိုက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ သုံးလလောက် အတူနေသွားပါတယ်။ နာမ်ရုပ်နဲ့ ဝိဇ္ဇာကြီးပါ။ အဘိုးက ကျွန်တော့်ကို အလွန်ချစ်ပါတယ်။ ညအိပ်တော့လည်း ကျွန်တော်နဲ့ အတူအိပ်ပါတယ်။ မြေးအဘိုးနှစ်ယောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကြနောက်ကြ နေကြပါတယ်။ သုံးလလောက်ကြာတော့ တစ်ညမှာ ရသေ့ဝိဇ္ဇာကြီးတစ်ပါး ရောက်လာပြီး အိပ်ယာထဲက အတင်းနှိုးပြီး ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ အဲဒီကတည်းက အဘိုးဝိဇ္ဇာရသေ့ကြီးနဲ့ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
ညနေ ၄ နာရီမှာ မကွေးမြသလွန်ဘုရား ဖူးပါတယ်။ မြသလွန်ဘုရားမှာ ငွေ ၅၀ဝဝ လှူ၊ ပန်း များလှူ၊ ဂုဏ်တော်ပုတီး ၉ ပတ်စိပ်ပြီး ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်က ဧရာဝတီမြစ်ဘက် ရှုမျှော်ခင်းများကြည့်ရှုပြီး ဟော်တယ်သို့ ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် ၁၆. ၁. ၂၀၁၈ ရက်နေ့မနက် ရှစ်နာရီမှာ မကွေးမှ ရွှေမန္တလေးကားနဲ့ ရန်ကုန် ပြန်လာပါတယ်။ အပြန်မှာတော့ ကားက နတ်မောက်လမ်းမှ မပြန်ဘဲ တောင်တွင်းကြီးဘက်က ပြန်ပါတယ်။ တောင်တွင်းကြီးမြို့ထဲကိုလည်း မရောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဒီလမ်းကို တစ်ခါမျှ မသွားဖူးပါဘူး။ ကားက ၃ နာရီလောက်မောင်းပြီးမှ မန္တလေး-ရန်ကုန် အမြန်လမ်းမကြီးရောက်ပါတယ်။
လမ်းက ကျဉ်းတယ်။ တောတွေတောင်တွေ အထပ်ထပ်ဖြတ်ရပါတယ်။ အဆင်းအတက်အကွေ့ အကောက်လည်းများပါတယ်။ ကားနှစ်စင်းဆုံလျှင် ကားကိုရပ်ပြီး ရှောင်နေရပါတယ်။ ဒီခရီးမှာတော့ သစ်တောတွေတော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ သစ်ပင်ကို ခုတ်မည်ဆိုလျှင် အထုတ်ရအလွန်ခက်ပါတယ်။ ချပ်တွေလျှိုတွေ အလွန်များပါတယ်။ လူ တောင် တက်ဖို့ဆင်းဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တောင်ပေါ် မရောက်ခင် ဆည်မြောင်းတွေ ဖောက်လုပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နဝတအစိုးရလက်ထက် ဖောက်လုပ်တဲ့ဆည်မြောင်းတွေဖြစ်ပုံရပါတယ်။ နဝတအစိုးရ လက်ထက်မိုးခေါင်တဲ့ဒေသတွေမှာ ဆည်မြောင်းတွေ ဖောက်လုပ်ပေးတာ၊ မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးတာဟာဖြင့် ပြည်သူတွေကို အလွန်အကျိုးများစေပါတယ်။
အမြန်လမ်းပေါ်မှာ ကားသွားနေရင်း ကျွန်တော့်ရှေ့သို့ သင်္ကန်းတော်အပြာရောင်နှင့် ဘုရား ရှင်ကြီးတစ်ဆူ ကြွရာက်တော်မူလာတာ ဖူးတွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကြီးက ဒကာကြီးရွှေသူဋ္ဌေးကြီး ဖြစ်အောင်တူးရမည့် ရွှေတွင်းသုံးတွင်းကို မိန့်ကြားမည်။ ကသာခရိုင်ထီးချိုင့်မြို့အနောက်ဘက် ၃ မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ ရွှေတွင်း၊ နောက်တစ်တွင်းက တောင်တွင်းကြီးမြို့အရှေ့ဘက် ၅ မိုင်အကွာမှာ ရှိတဲ့ရွှေတွင်း သုံးတွင်းကို တူးဖော်ရမည်။ နောက် ၂ နှစ်နေလျှင် တူးဖော်ရမည် မိန့်ကြားသွားပါတယ်။
ကျွန်တော် ၁၅. ၁. ၂၀၁၈ ရက်နေ့ မနက်က အထက်စက်တော်ရာဘုရားမှာ ရွှေသင်္ကန်းကပ် လှူပြီး ရွှေသူဋ္ဌေးကြီးဖြစ်ရပါလို၏လို့ တောင်းတဲ့ ဆုတောင်းပြည့်တဲ့သဘောလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စက်တော်ရာဘုရားသမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးကျော်စိန်ဝင်းပြုစုတဲ့ သမိုင်းမော်ကွန်း ရွှေစက်တော်စာအုပ်မှ အကျဉ်းအားဖြင့် တင်ပြချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်လမ်းကို ရှေးခေတ်က သုနာပရန္တတိုင်းဟု ခေါ်ဆိုကြ၏။ ထိုတိုင်းတွင် ယခုလယ်ကိုင်းမြို့ အရှေ့ဘက်တွင် ဝါဏိဇ္ဇဂါမရွာကြီးရှိ၏။ ထိုရွာတွင် စူဠပုဏ္ဏနှင့် မဟာပုဏ္ဏဆိုသည့် ကုန်သည်ညီနောင်တို့ရှိ၏။
တစ်နေ့သ၌ အစ်ကိုဖြစ်သူ မဟာပုဏ္ဏသည် အနောက်မဇ္ဈိမသို့ ကုန်ရောင်းသွားရာ သာဝတ္ထိမြို့တွင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နှင့်တွေ့၍ ဘုရားရှင်၏ တရားဓမ္မများကို နာကြားခွင့်ရခဲ့ပြီး ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးရာ ဇေတဝန်ကျောင်းသို့လိုက်ပါကာ ရဟန်းဘဝသို့ ကူးပြောင်းလိုက်၏။ ဘုရားရှင်၏ တရားဓမ္မများကို အားထုတ်၍ နေထိုင်ခဲ့လေ၏။
တစ်နေ့သောအခါ မဟာပုဏ္ဏသည် ၎င်း၏ နေရင်းဌာနဝါဏိဇ္ဇဂါမရွာသို့ ဘုရားရှင်အားခွင့်ပန် ပြီးပြန်ကြွလာ၏။ မကုလကာရာမ ခေါ် တောကျောင်းနေရာတွင် တရားအားထုတ်နေလေ၏။ နောင်သော် ရဟန္တာဖြစ်၍ သွားလေ၏။ စူဠပုဏ္ဏညီငယ်သည် ကုန်သွယ်သွားရင်း မလေးရှားမှ စန္ဒကူးသစ်များ ရရှိလာ၏။ နောင်တော် မဟာပုဏ္ဏအတွက် ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးမည့် ရည်ရွယ်၏။ မဟာပုဏ္ဏက ဤစန္ဒကူးကျောင်းတော် သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်သာ ထိုက်တန်သည်ဆိုပြီး ဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာသော ကျောင်းတော်ကြီးကို ဆောက်လုပ်ကြလေတော့၏။
မဟာပုဏ္ဏမထေရ်သည် ကျောင်းတော်ကြီး ပြီးစီးသောအခါ သာဝတ္ထိပြည်သို့ သွားရောက်ပြီး ဘုရားရှင်အား စန္ဒကူးနံ့သာကျောင်းတော်ကြီးကို အလှူခံရန် ပင့်ဖိတ်ခဲ့၏။ ဤသို့နှင့် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၂၄ ခုတွင် ဘုရားရှင်သည် နောက်ပါသံဃာ ၄၉၉ ပါးနှင့်အတူ ကြွချီလာ၏‌။ မြတ်စွာဘုရားနှင့် သံဃာတော်များ ဝါဏိဇ္ဇ ဂါမရွာရောက်သောအခါ လူအပေါင်းက သောင်းသောင်းဖျဖျကြိုဆိုကြ၏။ ဆွမ်းခဲဖွယ်များ ကပ်လှူကြ၏။ ဘုရားရှင်သည် စန္ဒကူးနံ့သာကျောင်းတွင် နေထိုင်သီတင်းသုံး၏။ ကျောင်းကို အလှူခံ၏။ မြတ်စွာဘုရား ၇ ရက်သီတင်းသုံးပြီး အပြန်တွင် နမ္မဒါမြစ်ခေါ် မန်းမြစ်(မန်းချောင်း) တစ်ဖက်ကမ်း၌ ဆင်းသက်စဉ် မန်းမြစ်အတွင်းမှ နဂါးမင်းကုန်းပေါ်တက် ရောက်လာပြီး ဘုရားရှင်အားပူဇော်၏။ နောင်အရှည်သဖြင့် ကိုးကွယ်ရန် တစ်စုံတစ်ရာ ချီးမြှင့်ပေးသနား ရန် တောင်းပန်၍ မန်းမြစ်ကမ်းစပ် မြသားအဆင်း ကျောက်ဖျာထက်တွင် ဝဲဘက်ခြေတော်ရာတစ်ဆူ ချ၍ ပေးသနားလေ၏။
ထိုမှတစ်ဆင့် ဘုရားရှင်သည် မကုလတောင်ပေါ်သို့ တက်၏။ တောင်ပေါ်တွင် သစ္စဗန္ဓရဟန္တာ သစ္စဗန္ဓရသေ့ဘဝမှ ရဟန္တာဖြစ်လာသူနှင့် တွေ့၍ အဖူးမျှော်ခံ၏။ သစ္စဗန္ဓ ရဟန္တာအားလည်း နောင်အစဉ်သဖြင့် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန် တစ်စုံတစ်ရာ ပေးသနားတော်မူခဲ့၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ခြေတော်ရာကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုရာတွင် ထိုစက်တော်ရာများ၏ သ္ခင်သဉာပ လောကသုံးပါးကို အတုမရှိသိတော်မူသော လောကဝိဒူဂုဏ်၊ လောကသုံးပါးမှ လွတ်မြောက်တော်မူသည် (တိလောကန္တဂုဏ်)တို့ကို အာရုံပြု၍ ကြည်ညိုလိုက် သောအခါ ထူးမြတ်သော ကုသိုလ်တရားလည်း ဖြစ်တည်လာလေ၏။
ဘုရားရှင်၏ စက်တော်ရာများကို မြန်မာမင်း အဆက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြ၏။ သက္ကရာဇ် ၁၅၁ ခုနှစ်တွင် ဒွတ္တဘောင်မင်းကြီး စက်တော်ရာကို အဖူးအမျှော်ရောက်ခဲ့ပြီး ရွှေဇရပ်နှစ်ဆောင် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့၏။
သက္ကရာဇ် ၁၅၂ နှစ်တွင် ဝေဘာဂီပြည်ကို အစိုးရသော ပထမမင်းခေါင်သည် စက်တော်ရွာကို အဖူးအမျှော်ရောက်ခဲ့ပြီး ရွှေချိန် ၁၀ဝ လှူဒါန်းခဲ့၏။
သက္ကရာဇ် ၁၅၄ ခု ပါတလိပုတ်ပြည်ကို အစိုးရတော်မူသော မနန္ဒမင်းသည့် ပါဒစေတီနှစ်ဆူကို အဖူးအမျှော်ရောက်ရာတွင် ကြေးပြဿဒ်နှစ်ဆောင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့၏။
ပေါက္ကံပြည်ကို အစိုးရသော တရားသူကြီးမင်း၊ ကွမ်းထမ်းမင်းရာဇာ၊ အနော်ရထာမင်းစော၊ ကျန်စစ်မင်း၊ နရပတိစည်သူမင်း၊ နန်းတောင်းများမင်း၊ ကျစွာမင်း၊ ကုန်းဘောင်ခေတ် အလောင်းမင်းတရားကြီး ကနောင်တော်ကြီးမင်း၊ မင်းတုန်းမင်းကြီး နာမည်ကြီးဆရာတော်သံဃာတော်များ နာမည်ကြီး လူပုဂ္ဂိုလ်များခေတ်အဆက်ဆက် ကိုးကွယ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီသည်လည်း အဆောက်အဦးများစွာ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
မြတ်စွာခြေတော်ရာ အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားတန်ခိုးတော်ကြောင့် တောကြီးမျက်မဲ လူသူနဲ့မနီးတဲ့ ဒေသမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလာရောက် ပူဇော်ကန်တော့နေကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အသီးသီးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း ဘုရားခြေတော်ရာအစစ်ကို လာရောက်ဖူးမျှော်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရင်ကြီးတွေ ဆရာတော်တွေ ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ လာရောက်ဖူးမျှော်ကြရတဲ့ ရွှေစက်တော်ဒေသကို သန့်ရှင်းတဲ့ ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ဘုရားဖူးရာဒေသ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အပျော်အပါး ခရီးထွက်တဲ့ဒေသ အဖြစ်သို့ မရောက်ရှိသင့်လို့ ယူဆပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ရဟန္တာကြီး တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်နာသင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မှီငြမ်းကိုးကားစာ။ ။ သမိုင်းမော်ကွန်း ရွှေစက်တော် ကျော်စိန်ဝင်း
(ဤဆောင်းပါးပါ အယူအဆများသည် စာရေးသူ၏အယူအဆများသာဖြစ်ပါသည်၊ အယ်ဒီတာအဖွဲ့၏ အာဘော်မဟုတ်ပါကြောင်း၊ အယ်ဒီတာအဖွဲ့)
“ကံအညံ့ေတြႀကံဳေနလား၊ လာဘ္ပြင့္ခ်င္လား၊ အမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး လက္ထက္က ယၾတာေကာင္း”